ရေနံချောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » ရေနံချောင်း
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 8, 2013 in Poetry | 34 comments
ဒီနေ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် လိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ ဒီကဗျာလေး လာတွေ့လို့ …။
အဲ့ဒါ … မဖတ်ဖူးသူတွေအတွက် ပြန်ရှဲပါတယ်ပေါ့ ….။
စကားစပ်တုန်း ကျုပ်အကြောင်း ထည့်ပြောရရင် …
ကျုပ်က ရေနံချောင်းသား စစ်စစ်တော့ မဟုတ်ဘူး ….။
ရေနံချောင်းမြို့နယ် အနီးအနားက ပုစိညှောင့်တောက် ရွာလေးတစ်ရွာမှာ မွေးခဲ့တာပါ ….။
နေသာတဲ့ မနက်ခင်းတွေဆို …
ရွာမြောက်ဘက်ကနေ လှမ်းငေးကြည့်လိုက်ရင် ပုပ္ပါးတောင်ကြီးကို လှမ်းမြင်ရပါ့ဗျား ..။
ဆိုလိုချင်တာက … ကျုပ်က ရေနံချောင်းမြို့သား မဟုတ်ပေမယ့် …။
ရေနံချောင်း တောသား တစ်ယောက် ဖြစ်လေတော့ …။
ရေနံချောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒီကဗျာကို ရှဲတယ်ပေါ့ဗျာ …။
ဤကား … စကားပို ….။
ခုတော့ … လူပေးသူပေး
ခေတ်ပေါ်ဝတ်စုံလေးတစ်ထည်ကိုတောင် ဝတ်ဆင်မထားနိုင်တဲ့ ငနဲ။
ဒီငနဲ ဝမ်းဗိုက်သားထဲက၊ ဖေါက်ထွက်သွားတဲ့
ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးကို ပွေ့ပိုက်၊ ထွေးပွေ့ခွင့် ရရုံသာ။
ဒါကိုပဲ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့၊ ဟိုး ..တစ်ခါကရွှေထီးဆောင်းခဲ့တာကို
တစ်ချိန်က စည်ကားလှတဲ့ သဘောင်္ဆိပ်
သူ့ဆီက တိတ်တိတ်လေး၊ ထွက်ပြေးတာလည်းကြာပြီ
ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ၊ ချောမွေ့ဖို့တွေကို မျှော်လင့်နေတတ်သေး၊
သူ့ဆီ တစ်ခါတစ်ခါ လာလည်ဖေါ်ရသေးတဲ့
(ရှစ်ရာတန်) ပုဇွန်ထုတ်ကိုတောင် လန့်လန့်ပြီး
လူရိုသေ၊ ရှင်ရိုသေ၊ ရာဇဝင်ဆိုတာတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးပေမယ့်
ရာဇဝင်သစ်ထဲမှာ အခြားသူတွေ အားသစ်တွေနဲ့ နိုးထ
ပြီး .. တက်ကြွ၊ အံ့ချီးဖွယ်အဖြာဖြာ
အိပ်မှုံစုံမွှားနဲ့ထ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကယောင်ကတမ်းလှမ်းကြည့်ရရှာတဲ့ ငနဲပါ။
ပလက်ဖေါင်း အကျိုးအပဲ့တွေကို ကျောပေါ်မှာထမ်း
အဝါရောင်မသမ်းတစ်သမ်း ဘတ်သီးကို လည်မှာဆင်လို့
နောက်အကျကြီး ကျနေရှာတဲ့ ငနဲခမျာ
မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ နှလုံးသွေးကို ဖေါက်ထုတ်ခံရင်း …
နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်ကို လွမ်းမောတသရင်း ..
ပန်းကုံးစွပ်ပွဲတွေကို မျှော်ငေးရင်း ..
နေ့ဖို့ညစာကို အလျင်မီအောင် ရှာဖွေလို့သာ
လောကဓံတရားရှစ်ပါးနဲ့ လိမ်းကြံထားတဲ့ ဥတုသုံးလီထဲ
By – တွတ်တွတ်မောင်
Source : Yenangyaung.Wordpress.Com/
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီ ဘက်က လူတွေ က အနုပညာဘက်ရော ပညာရေးဘက်ရော ထူးချွန်တာများတယ်လို့ ကြားဖူးတာပဲ။
မမဂျီး အညင်မှန် ချိဒလယ် …
ကျန်ဒဲ့လူဒွေလည်း အညင်မှန် ရနိုင်ဂျဘာစေ …
ဒီစကားနဲ့တင် မုန့်ပါ မကဒေါ့ဘူး ..
ဘီဘီပါ တိုက်ပလိုက်အုံးမှာ …
ရွာထဲမှာ ဓာတ်ပုံတင်လို့ ရပြီ ဟေး::::::::::::::::::
တွင်းပိုင်လို့ခေါ်တဲ့ ခေတ်ဟောင်းဘောစိတွေထွက်တဲ့ဒေသလို့ စွဲမှတ်နေမိတဲ့ မြို့တစ်မြို့ပေ့ါ။
ဘောစိတွေ အစား …
ငမွဲတွေပဲ များတဲ့ နယ်တစ်ခုပေါ့ …။
ဆရာမဂျူးရဲ့ မြို့ ပေါ့နော်
ပုံက ပုံမှန်တင်လို့ရပြီ လားးး တိချင်ပါဒယ်
ဟုတ်တယ် .. ဟုတ်တယ်
ဆရာမဂျူးရဲ့ မြို့ ပေါ့ကွယ် …။
ပုံတွေလည်း ပုံမှန် တင်လို့ ရသွားပါပြီကွယ် …။
ရေနံချောင်းနဲ့ အတင်းကို အမျိုးစပ်တော့တာပဲ….
ဟီးးး … ရဒေါ့ဘူးးးး
အကုန်လုံးကို ပတ်ပြီး အမျိုးစပ်ရဒေါ့မှာဘဲ …
ဂျူး ကလည်း ရေနံချောင်း က ..
ကျုပ် ကလည်း ရေနံချောင်း က …
ရေနံချောင်းချင်း တူတူပဲဟာကို …
အမှန်က ပုဂံငလျှင်လှုပ်ပြီး ရေနံကြောတွေ ဧရာဝတီမြစ်အောက်ငုပ်သွားထဲက…
မြို့ကမစည်တော့တာပါ… အခုလက်ရှိ ပြောပလောက်အောင် မထွက်…
မောင်သိန်းဆိုင်ရဲ့ “ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီး”ကို ကြံဖန်လွမ်းမိသေး…
အိုက်ဒီ ဧရာဝတီမြစ်အောက် ငုပ်သွားတဲ့ ရေနံကြောတွေကို ပြန်ဖော်ယူလို့ ရဝူးလားဟင် …
သူ့နေရာသူ ပြန်ရောက်အောင် ..
မျှားခေါ်လို့ ရလောက်ဘူးလားဟင်င်င် …
အိုက်ဂလို ရရင်ဒေါ့ မိုက်မယ် …
နောက်ခါ ပြန်ရင် မန်ဒန်နဲ့ မန်းမှုတ်ပြီး ပြန်ခေါ်ကျိအုံးမှဘဲ …
မြန်မာ့ရေနံလုပ်ငန်းက တွင်းတူး စပယ်ရှယ်လစ် Schlumberger ကိုခေါ်ပြီး၊ တွင်းကောက်တူးဖူးပါတယ်။ ဖြစ်သွားတာက ကျောက်လွှာ ၂ချပ်ကြား ပြတ်ရွေ့ကြားထဲညပ်သွားတာမို့ အတော်မလွယ်တဲ့အပြင် အောက်ကိုလည်းစိုက်သွားပါသတဲ့။ စုပ်ထုတ်ရင် ငလျင်ထပ်လှုပ်မည့်ဘေးရှိတာမို့ ရေသွင်းပြီး မှုတ်ထုတ်ရပါသတဲ့။ ဒါပေသည့် စီးပွါးဖြစ်အောင် အများကြီး မရတော့ပါဘူးတဲ့ဗျာ…
ရေနံတွေ ရေချိုအောက်ကိုမြုတ်… ရာဇ၀င်ရဲ့သူတို့သမီးနဲ့ညားသွားတဲ့.. ချောင်းပေါ့..။
.. အော်.. ချစ်တိုင်းလည်းမညား…။
အင်းဂလိပ်က သူတို့အဆုတ်မှာ ဘုံးခွဲပီး ရေနံကြော ရွေ့သွားအောင် လုပ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ တော့ ဟိုပါပါကြီး ပြောသွားတာပဲ
ကွိကွိ… အဲ့လိုနဲ့ပဲ စပါးမှာ-၁ သကြားမှာ -၂ ကနေပီး
ရေနံချောင်းကို ပေါ့သေးသေး မမှတ်နဲ့
ရေနံချောင်းသားကိုလဲ ပေါ့သေးသေး မမှတ်နဲ့
ရေနံချောင်းနဲ့ လာယှဉ်ရင် ..
အိုက်ဒီ သိကြား .. ကားသွားမှာပေါ့ …
မယုံရင် လာမယ့် ၂၁ ရက်နေ့ကျ လက်တွေ့ပြမယ် ..
ရောင်းပါ စားပလိုက်အုံးမယ် .. ခွိခွိ ..
မဟာရာဇာပဲ ပြားမလား ဆိုတာ
​ရေနံ​ချောင်းက ​ဖေကံ​ကောင်းဆိုတာ ဘူလဲကွ
ကျုပ် မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး
ဥဥဆာ ပေါဒလို ဖစ်လာမှာပေါ့ …
ရေနံဂျောင်းက ဖေကံမကောင်းသေး … ဟီးးး
ရေနံချောင်း ဆိုတာ ရေနံထွက်မှန်း ခင်ညားပြောမှ ခုသိတာ
အဲ့ ရေနံမထွက်တော့ဘူး ဆိုတာလဲ ကွန်းမင့်တွေ ဖတ်ပီး ခုမှသိတာ …..။
အပြင်စာ ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း ကျုပ်ကတော့ ခင်ညားရဲ့ အသီးကွဲ ဒတ်သဏတွေကို လွှတ်ကြိုက်တဲ့သူ
ဆိုတော့ ဒီကဗျာကို ကျုပ်မကြိုက်ဘူး ….
သခင်ဖိုးလှကြီး အကြောင်းမပါလို့ …
ခုနောက်ပိုင်း အဂ္ဂမဟာ ပို့စ်မော်ဒန် ကဗျာတွေ ဖတ်ရတာ စကားလုံးတွေ တရကြမ်း ဆန်းထားတာကလွဲပီး …
စာပိုဒ်တွေ ခွဲရေးထားသလိုဘဲ …. ကျုပ်တောင် ပို့စ်တပုဒ် တင်မလို့ လိုတိုရှင်း စာပိုဒ်ခွဲလိုက်ရင် ကဗျာဟန်ဆောင်ပီးသား
ဒီကဗျာကို ကျုပ်မကြိုက်ဘူး …
ငှဲ … ငှဲ … အဲ့လာ စာပိုဒ်ခွဲလိုက်ရင် ပို့စ်မော်ဒန်ဘဲ
ပြေးဘီ …. အာဘွား ….
မကြိုက်လို့ မကြိုက်ဘူး ပြောတယ် …
မကြိုက်ဘူး .. မကြိုက်ဘူး …
လေးခါတောင် ပြောတယ် ..
အင်မတိ အင်မတန် လေးနက်သွားတယ် …
အထက်ပါ အချက်များကို ထောက်ရှုသဖြင့် ခညား မကြိုက်တာ သေဂျာဒယ် … (မှန်းတုတ်)
ခညားဂျီး ရေးမယ့် …
ပို့စ်မော်ဒန် ကဗျာကို မျှော်နေဒယ်နော် …
မေ့မသွားနဲ့ …. အုံး …. အုံး …
အန်တယ်ဂျီး နဲ့ ဥငေးကျောက်
ဟိုဥငေး ဂလည်း ရေနံ့သာ ခင်ခင်ကြီး ကို လွမ်းဒယ် ဆိုဗျဲ …
အန်တယ်ဂျီး ဂလည်း လွမ်းဒယ် ဆိုဒေါ့ ..
ဟုတ်ဒေါ့ ဟုတ်နေဘီ … ဟီဟိ
နှစ်ယောက်သား တေ့ပေးလိုက်ရင် နဘန်းများ ချဂျမလား သိဝူးးး ဟီးးး
နောက်ဒါ .. ဂဒေါ့ …
ရေနံချောင်း ဆိုတာ နဲ့ ဂျူး ကို မြင်သူမြင်ကြ၊ ခင်ခင်ကြီး ကို မြင်သူမြင်ကြ။
အခုတော့ မောင်အံ ကိုလဲ မြင်ပေးပါ့မယ်။
ရေနံ မထွက်တော့ တဲ့ သမိုင်း ကို ကကျောက် ရှင်းပြမှ သိပေတော့တယ်။
ဒီအတိုင်း ကုန် သွားတယ် မှတ်တာ။ တော်ချက်က။
မြန်မာပြည်မှာ ရှိပြီး ရေနံ တွေ လမ်းလွဲ သွားတာ ဟို လူတွေ ရန် ကို ကြောက်လို့ ဖြစ်ရမယ်။
ရေနံရောင်းရငွေ တွေ ကိုသာ အိတ်ထဲထည့်နိုင်လို့ကတော့ အိမ်ကိုပါ စိန်စီနိုင်မှာ။
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ ကမ္ဘာကုန်ကျယ်သရွေ့ ထဲက ဆရာကိုမြင့်ခိုင်နဲ့ မမနွယ် ကိုသတိရပေးပါမယ်။
ဲပီးရင်တော့ ဆရာအံပေါ့။မပြီးဆုံးသော အခန်းဆက်ဝတ်ထုရှေကြီးများအိ ဆရာ့ဆရာကြီး ဆရာအံ လို့ တနေ့နေ့မှာ နာမည်ကြီးဖြစ်မှာသေချာ။
ရေနံတွေ ငုပ်လျှိုးသွားသလို ကျောက်မျက်တွေလည်း မငူပ်လျှိုးဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူးနော်။
ဖိုးလှကြီးတို့ သပိတ်ပွဲလည်း ရေပူရေအေးကပ်ခဲ့သေး
မြစ်မင်းဧရာကို ဖူးစာကုန်း ကမ်းပါးပြတ်က
သခင်ဖိုးလှကြီး ခေါင်းဆောင်တဲ့ နယ်ချဲ့ သပိတ်တိုက်ပွဲ ၁၃၀၀ ပြည့် သမိုင်းတွင်ရစ်ခဲ့တဲ့ မြို့ဘက်ကသူမို့ “အံစာတုံး´´ အမည်ရှေ့မှာ “မဟာရာဇာ´´ ဆိုပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထဲ့ခဲ့တာကိုး “မဟာရာဇာ အံစာတုံး´´ရေ၊
အဲဒီဘက်က လက်ယက်ရေနံတွင်းမှော်တွေထဲ တစ်နှစ်နီးပါးလောက် ကျင်လည်ခဲ့ဖူးသေးဗျ။ လက်တုံကင်ခေါ်တဲ့ စွန်ရစ်ဘီးလိုမှာ ကြိုးနဲ့ရေနံခတ်ခွက်ကလေး တွင်းထဲကိုချ ပြန်ဆွဲတင် နဲ့ အေးဆေးလေး ထိုင်ကာ လက်နှင့်လှည့်ခတ်တာ တစ်ညကို တိုင်ကီပီပါ တစ်ဝက်လောက်ရတယ်။ အဲဒါကို တရုတ်အဖွဲ့က စက်ကလေးနဲ့ ဆွဲစုတ်မယ်ဆိုပြီး လုပ်ကြတာ တစ်စက်မှမရဘူးမို့ လက်လျော့ခဲ့ရတဲ့ လက်တွင်းတွေခေတ် စားခဲ့တဲ့ ရေနံမှော်တွေပေါ့ဗျာ။
ရေနံချောင်းက ကိုယ့်ဒူး ကိုယ်ချွန်တဲ့မြို့.. ရိုးသားအေးဆေးတဲ့ မြို့သူ /သား တွေလည်း နေထိုင်ကြတယ်.. တောင်ကုန်း တောင်တက် ပေါတဲ့မြို့လည်း ဖြစ်တယ်… အသွားကို စက်ဘီးစီး ရင် အပြန်ကျ စက်ဘီးက လူကို ပြန်စီးတယ်…
ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက ၊ လူအမည် ကိုဇော်သိန်း၊ (၆) ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင်၊ မွေးဖွားရာ ဇာတိလည်း ဖြစ်တယ်.. ဆရာမ ဂျူး ကိုလည်း မွေးထုတ် ပေးထားတယ်…
မွန်ကစ် ငယ်ဘ၀ ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့နေရာ ဒေသလည်းဖြစ်တယ်… လွမ်းလိုက်တာနော်…..
ကျုပ် ပို့စ်လေးမှာ ဝင်ရောက်လို့
ကျုပ်က ကျေးဇူး အထူးပါလို့ …။
ကိုယ့်အရပ်နဲ့ဝေးလှပေမယ့်ငယ်ငယ်က မောင်သိန်းဆိုင်ရဲ့ ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီးကိုတခမ်းတနားဖတ်ခဲ့ရလို့ ရေနံချောင်းနဲ့ရင်းနှီးနေတာပါ။
ရေနံချောင်းသူ သူငယ်ချင်းတရုတ်မတေစ်ယောက်ရှိတယ် အရမ်းချစ်ရတာပေါ့။
သူ့ နာမည် တစ်ခါ ထည့်သုံးရင်.. တစ်ခါ.. အသိပေးပါ တဲ့…